Mgbasa Ozi Omume vs. Mgbasa Ozi Contextual: Kedu ihe dị iche? | Martech Zone
Mgbasa ozi dijitalụ mgbe ụfọdụ na-enweta rap na-adịghị mma maka mmefu a na-emefu, mana enweghị ịgọnarị na, mgbe emechara ya nke ọma, ọ nwere ike iweta nsonaazụ dị ike.
Ihe bụ mgbasa ozi dijitalụ na-enyere aka iru obosara karịa ụdị ahịa ahịa organic ọ bụla, nke mere ndị na-ere ahịa ji dị njikere itinye ego na ya. Ọganihu nke mgbasa ozi dijitalụ, n'ezie, dabere n'otú ha si kwekọọ na mkpa na ọchịchọ nke ndị na-ege ntị.
Ndị na-ere ahịa na-adaberekarị na ụdị mgbasa ozi abụọ iji mezuo nke a - mgbasa ozi gburugburu na mgbasa ozi omume.
Pụtara dị n'azụ Mgbasa Ozi Omume na Ọdịnihu
Mgbasa ozi omume gụnyere igosi ndị ọrụ mgbasa ozi dabere na ozi gbasara omume nchọgharị ha gara aga. Nke a na-eme site n'iji data anakọtara na paramita dị ka oge ejiri na webụsaịtị, ọnụọgụ ọpịpị emere, mgbe a gara na saịtị ahụ, na ndị ọzọ.
A na-eji data a wuo ọtụtụ ndị ọrụ nwere njirimara dị iche iche nke enwere ike ịgbado mgbasa ozi dị mkpa maka ya. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị jikọtara ngwaahịa A na B, ndị na-ege gị ntị nwere mmasị na A ga-enwe ike itinye aka na B.
N'akụkụ aka nke ọzọ, mgbasa ozi gburugburu ebe obibi gụnyere itinye mgbasa ozi na ibe dabere na ọdịnaya nke ibe ndị ahụ. Ọ na-eme site n'iji usoro a maara dị ka nledo anya gburugburu, nke mejupụtara mgbasa ozi nkewa dabere na isiokwu ma ọ bụ mkpụrụokwu dabara adaba.
Dịka ọmụmaatụ, ibe weebụ nke na-ekwu maka akwụkwọ nwere ike ịnwe mgbasa ozi maka enyo ọgụgụ. Ma ọ bụ webụsaịtị na-ebipụta vidiyo mgbatị ahụ n'efu, usoro na usoro nri nwere ike ịgbasa mgbasa ozi maka cookware n'akụkụ mgbatị ahụ ya - otu esi eme ya. Ngwakọta ahụike eme.
Kedu ka Mgbasa Ozi Contextual Si arụ ọrụ?
Ndị mgbasa ozi ihe gbasara ọnọdụ na-eji ikpo okwu dị n'akụkụ ihe na-etinye mgbasa ozi ha na ibe ndị dabara adaba.
Ịtọ ntọala paramita bụ nzọụkwụ mbụ. Ọ bụ ezie na isiokwu bụ ngalaba izugbe nke mgbasa ozi ga-adaba na (dị ka ejiji, ndọrọ ndọrọ ọchịchị, isi nri, ma ọ bụ ahụ ike), mkpụrụokwu na-enyere aka nlebara anya kpọmkwem n'ime isiokwu ndị ahụ. Maka ọtụtụ mgbasa ozi, ịhọrọ otu isiokwu yana ihe dị ka mkpụrụokwu 5-50 maka isiokwu ahụ kwesịrị ezuru.
Mgbe ahụ, Google (ma ọ bụ ihe nchọta ọ bụla a na-eji) ga-enyocha ibe ndị dị na netwọk ya iji kwekọọ na mgbasa ozi na ọdịnaya kachasị mkpa. Na mgbakwunye na isiokwu ndị onye mgbasa ozi ahọrọla, igwe nchọta ahụ ga-eburu ihe dịka asụsụ, ederede, nhazi ibe, na nhazi njikọ n'ime akaụntụ.
Dabere n'otu aka onye mgbasa ozi chọrọ ka iru eru dị, igwe nchọta nwere ike ịtụle naanị ibe dabara na mkpụrụokwu enyere. Ozugbo nyochachara, a ga-edobe mgbasa ozi ahụ na ibe ihe nchọta nke e chere na ọ kacha mkpa.
Kedu ka Mgbasa Ozi Omume Si arụ ọrụ?
Ebe ọ bụ na mgbasa ozi omume dabere na omume ndị ọrụ gara aga, ihe mbụ ndị mgbasa ozi kwesịrị ime bụ soro omume ahụ. Ha na-eme ya site na kuki, nke ha na-etinye n'ime draịvụ ike onye ọrụ mgbe ọ bụla mmadụ gara na webụsaịtị ika (wee họrọ ịnakwere kuki).
Kuki na-enyere ha aka ịhụ ebe onye ọrụ na-eme nchọgharị, kedu nsonaazụ ọchụchọ ha na-pịa, ugboro ole ha na-aga na webụsaịtị ika, ngwaahịa ndị ha na-edepụta ma ọ bụ na-agbakwunye na ụgbọ ala, na ihe ndị ọzọ.
N'ihi ya, ha nwere ike ịchụ ndị ọrụ mgbasa ozi metụtara ma ha nọ na webụsaịtị maka oge mbụ ma ọ bụ na-azụghachi ndị na-azụ ahịa. Ndị mgbasa ozi na-ejikwa kuki iji soro mpaghara ala yana parampat adreesị IP iji kwado ndị ọrụ nwere mgbasa ozi metụtara mpaghara.
N'ihi nsochi omume, ndị ọrụ nwere ike ịhụ mgbasa ozi maka ika ha chọgharịrị n'izu gara aga mgbe ha na-agụ akụkọ n'ịntanetị ma ọ bụ na-achọgharị ihe dị iche kpamkpam. Ihe fọdụrụ n'ime mmasị ha gara aga ma ọ bụ nkwalite dị mkpa na mpaghara bụ ihe na-akpali ha ịpị.
Enwere ọtụtụ ngwaọrụ iji nyere ndị ụlọ ọrụ aka idobe omume onye ọrụ wee jiri mgbasa ozi were were gbado ha anya.
Kedu nke ka mma: Contextual or Behavioral?
Ọ dị mfe ịgbagha ụdị mgbasa ozi abụọ a, ebe ha abụọ na-egosi mgbasa ozi dabere na mmasị onye ọrụ. Otú ọ dị, ha dị nnọọ iche. Ọ bụ ezie na mgbasa ozi gburugburu na-arụ ọrụ dabere na gburugburu ebe onye ọrụ na-achọgharị - ọdịdị nke ọdịnaya webụsaịtị, n'ikwu ya n'ụzọ ọzọ - mgbasa ozi omume na-adabere n'omume onye ọrụ mere tupu ya eruo weebụsaịtị, dị ka ibe ngwaahịa nke ha gara.
Ọtụtụ na-ewere mgbasa ozi omume ka ọ bara uru karịa nke abụọ ahụ, ebe ọ na-eme ka nhazi onwe ya dị omimi site n'ịchụso ndị ọrụ dabere na omume ha n'ezie kama ịcha ọdịnaya metụtara weebụsaịtị. Otú ọ dị, e nwere ọtụtụ pụrụ iche uru nke mgbasa ozi gburugburu ebe obibi nke ahụ kwesịrị iburu n'uche.
Mfe nke Mmejuputa - Isi uru nke mgbasa ozi omume dabere na ọkwa nhazi nke ọ na-enye. Agbanyeghị, nke a chọrọ nnukwu data ndị ahịa na ngwaọrụ kwesịrị ekwesị iji nyochaa ya, nke nwere ike ọ gaghị adị ọnụ maka ụlọ ọrụ nwere obere akụrụngwa. Mgbasa ozi ihe dị n'ụdị dị mfe yana obere ọnụ iji malite yana na-enye mkpa zuru oke iji bụrụ ụzọ magburu onwe ya isi dọta ndị ọbịa saịtị. N'ikwu nke ahụ, ụlọ ọrụ na-adabere kpamkpam na kuki ndị ọzọ iji nye ndị ọbịa webụsaịtị ahụmịhe mgbasa ozi ahaziri iche. Otú ọ dị, site n'ịbawanye ụkpụrụ na data (GDPR) nke enwere ike ịnakọta ma jiri ya mee ihe n'aka ndị ọrụ, ụlọ ọrụ ga-achọ ngwá ọrụ dị elu na ngwanrọ maka ijikwa mgbasa ozi mgbasa ozi gburugburu ha n'ihi na enwere otu nzọụkwụ ọzọ gụnyere, ya bụ, ịrịọ maka ikike n'aka. onye ọrụ na-anakọta data ha. Ya mere, ọ bụrụ na ịchọrọ ịkwado nkuchi dijitalụ ngwa ngwa na nghọta dị elu banyere mgbanwe ọhụrụ na mgbasa ozi na otu ịre ahịa gị, n'ọnọdụ dị otú ahụ, mkparịta ụka mmekọrịta nwere ike ijikọ na ngwanrọ mgbasa ozi gị dị ka ụzọ iji zụọ ha.
Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike wulite usoro nlegharị anya iji kwado ihe ncheta maka ndị mgbasa ozi gị na-ewepụta mkpọsa mgbasa ozi na EU. Ị nwere ike ibunye ndepụta nlele ma ọ bụ modul microlearning iji nye ndị ọrụ njedebe ozi nha nha ka ha kpuchie ntọala niile mgbe ha na-ahazi mkpọsa wee soro usoro niile nke ọma. Nke ahụ na-eduga anyị n'isi ihe nke abụọ.
Nzuzo - Ntarahụhụ maka iji ozi onye ọrụ nkeonwe eme ihe n'ụzọ na-ezighị ezi nwere ike buru ibu. Ọzọkwa, kuki adịkwaghị na webụsaịtị akpaghị aka, ndị ọrụ kwesịrị iji aka ha wee banye maka ha, na-eme ka nlọghachi azụ sie ike karị. Ị hụrụ, ndị ọrụ na-achọ nzuzo ka ukwuu, gụnyere nhọrọ, nghọta, na njikwa otu esi eji data ha. Dị ka o kwesịrị ịdị, gburugburu ebe nrụọrụ weebụ ga-adabarịrị n'ọchịchọ ha na-abawanye ụba. Ebe Safari na Firefox ewepụla kuki ndị ọzọ, Google ga-eme ya ihe karịrị afọ abụọ. Mana ebe ọ bụ na mgbasa ozi gbasara ọnọdụ anaghị adabere na kuki, ndị mgbasa ozi gị ekwesịghị ichegbu onwe ha maka ịghara ịkwado mgbe ha gosipụtara mgbasa ozi ha.
Nchekwa aha ika – Otu akụkụ nke nchekwa bụ ihe ịrụ ụka adịghị ya na nnabata iwu. Agbanyeghị, aha ọma nwere ike bụrụ ihe aghụghọ a ga-echebe, ọkachasị ebe ndị mgbasa ozi enweghị ike ịchịkwa ebe mgbasa ozi ha gosipụtara. Ọtụtụ mgbe, ụdịdị echewo azụ azụ n'ihi na mgbasa ozi ha na-enwu na saịtị ndị okenye ma ọ bụ ndị nwere echiche oke egwu. Agbanyeghị, nke a bụ nsonaazụ omume onye ọrụ. N'ụzọ dị iche, mgbasa ozi gburugburu na-etinye ibe weebụ n'etiti ihe, akara ahụ na-ejikwa ibe weebụ ahụ site n'ịkọpụta isiokwu, isiokwu ndị dị n'okpuru, na isiokwu ndị metụtara mgbasa ozi ahụ.
Karịrị mkpa - Echiche bụ isi na-akwado mgbasa ozi omume bụ na ndị ọrụ chọrọ ịhụ mgbasa ozi metụtara usoro izugbe na omume nchọgharị ha. Otú ọ dị, ọ nwere ike ime na ọchịchọ ha ugbu a adịghị adaba na usoro ndị ahụ. Dịka ọmụmaatụ, onye na-achọgharị akụrụngwa egwuregwu nwere ike ọ gaghị achọ ịhụ mgbasa ozi gbasara ọrụ imewe eserese, ọbụlagodi na ọ chọburu ụzọ maka ọrụ imewe eserese. N'ụzọ dị iche, mgbasa ozi maka ntụ ntụ protein organic nwere ike ịdị mkpa karịa ọnọdụ uche ha ugbu a ma dọta ọtụtụ clicks.
Ọ dịghị ihe ize ndụ nke ọkọlọtọ kpuru ìsì - Nke ahụ bụ ihe a na-ahụkarị ebe ndị ọrụ amụtala ileghara mgbasa ozi anya n'amaghị ama. Dịka ọmụmaatụ, saịtị ntinye akwụkwọ tiketi na-agba ọsọ mgbasa ozi maka ikpo okwu nyocha ihe nkiri na-eme ka uche karịa ịnye mgbasa ozi metụtara cookware.
Ndị mmadụ na-echetara mgbasa ozi dabara adaba nke ụdị amachaghị ama 82% karịa ma e jiri ya tụnyere mgbasa ozi nke ụdị ama ama mana ọ dịghị mkpa na ọdịnaya ibe.
Na mgbakwunye, ọtụtụ ndị mmadụ anaghị enwe ahụ iru ala maka mgbasa ozi na-egbuke egbuke dabere na ọrụ nchọgharị ha gara aga. Enwere echiche izugbe nke nnukwu ụlọ ọrụ na-enyocha ya nke nwere ike igbochi ndị mmadụ ịpị mgbasa ozi ọbụlagodi na mgbasa ozi n'onwe ya nwere ike ịdị mkpa. N'aka nke ọzọ, mgbasa ozi gburugburu ebe obibi dabara na mgbasa ozi ahụ na ibe weebụ, na-eme ka ọ dị obere 'dị ka' na ntụkwasị obi karịa ịpị. Mgbe ndị ọrụ hụrụ mgbasa ozi dị mkpa, nleba mgbasa ozi na-enweta nkwalite, yana enwere ike ịbawanye ọnụego ọpịpị dị elu.
Dabere na Adpushup:
Nledo anya n'ọkwa 73% na-abawanye na arụmọrụ ma e jiri ya tụnyere ebumnuche omume.
49% nke ndị ahịa US jiri ihe nledo anya taa.
31% nke ụdị na-eme atụmatụ na-abawanye ego ha na-emefu na mgbasa ozi gburugburu n'afọ ọzọ.
Ọ bụ ihe niile gbasara "Context"
N'ikpeazụ, ha abụọ nwere ọrụ dị iche iche ha ga-arụ na atụmatụ ahịa dijitalụ, na ụdị dị iche iche nwere ike kenye ha nha dị iche iche.
Mana enwere oge mgbe mgbasa ozi gbasara ọnọdụ bụ nhọrọ ka mma. Ọ na-enyere ndị ika aka ịmalite mkpọsa nke na-achọghị ọtụtụ akụrụngwa maka mmejuputa zuru oke. Ọ na-echekwa na ha agaghị eji data onye ọrụ nkeonwe ma ọ bụ na-echegbu onwe ha maka irube isi na GDPR. Ha nwere ike ịga naanị maka ebumnuche isiokwu.
N'ikpeazụ, ihe dị mkpa bụ ịmara ihe ịchọrọ ka mgbasa ozi gị mezuo, otu ịchọrọ ime ka ndị ahịa gị nwee mmetụta maka ika gị, na ego ole ị dị njikere imefu iji nweta ya. Mgbe ahụ, mee nhọrọ gị - nsonaazụ ga-akwụ ụgwọ ka oge na-aga.
Tags: ngalaba mgbasa ozikuki mgbasa oziokwu mgbasa ozinzuzo mgbasa ozimkpa mgbasa oziadpushupmgbasa ozi ngalabaikpu ìsìmgbasa ozi omumeika ahachọgharịa akụkọ ihe mere emeonodumgbasa ozi gburugburu ebe obibimgbasa ozi gburugburu ebe obibiuru mgbasa ozi gburugburumkpokọta mgbasa ozi ọnọdụmma blenderNchịkwamgbasa ozi geolocationmgbasa ozi ihe gbasara googlegoogle ngosi mgbasa ozimgbasa ozi adreesị IPmpaghara mgbasa ozichoo mgbasa ozi